Njeri Rionge, nwanyị ahụ wetaara ịntanetị na ogbenye - AFRIKHEPRI
Njeri Rionge, nwanyi nke webatara ndi ogbenye
Izo zoro ezo - Akwụkwọ (2011-2016)
Ugbua na 2011, magazin a na-akpọ American Forbes, ọkachamara n'akụkọ ihe ịga nke ọma, wepụtara akụkọ banyere nwanyị a pụrụ iche, "onye na-azụ ahịa nke ọma n'Africa".
Akụkọ nke Njeri Rionge amalite na mbido nke 2000 afọ mgbe ọ kpebiri ịmalite Wananchi.com, onye na-ahụ maka ịntanetị. A mgbanwe na Kenya, mba ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị onwe ha na-ala azụ ịmara ihe ngwá ọrụ dijitalụ.
"Nye ya, mfe ịnweta ozi na Intanet bụ ụzọ isi dozie ọdịiche dị n'etiti ndị gụrụ akwụkwọ na East Africa na ndị ọzọ." Taa, ya Enterprise bụ ugbu a ISP dị ukwuu n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka ma kwupụta na 173 Million Dollar.
Na afọ 46, nwanyị a na-azụ ahịa enwebeghị ọrụ ọrụ ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma. Tupu ịbanye na telifon, ọ na-arụ ọrụ dịka onye na-edozi isi ma ọ bụ onye ahịa n'ahịa ụlọ ahịa na London.
Kemgbe ị na-apụ na Wananchi.com, Njeri Rionge akwụsịbeghị. N'ihe karịrị afọ 10, o kere ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa, Ignite, onye ọzọ na teknụzụ ọhụrụ, Insight. Ndị a bụ naanị ihe atụ nke ogologo usoro.
N'ajụjụ ọnụ ahụ o tinyere nye Forbes ọ na-akọwa:
"Ana m eke ulo oru uka n'ihi na ekwenyesiri m ike na Africa bụ mpaghara mpaghara akụ na ụba na-esote ma ọ dị mkpa ka anyị wulite òtù dị iche iche nke ga-akwado ọganihu."
Ihe oru ahu nke kachasi ya n'anya n'oge a? Nwekọrịta azụmahịa. Otu onye na-agba ume iji nyere ndị ọchụnta ego novice aka ịmalite, na-eto ma na-azụlite echiche ha.
Njeri Rionge na-ezube ikwe ka ndị ọzọ gbasoo ihe nlereanya ya wee ghọọ isi iyi nke mmụọ nsọ.
N'ihe banyere ụwa ya, ụwa nke teknụzụ ọhụrụ, ọ na - eche ọtụtụ nsogbu ihu ugbu a ịchọta onye ọrụ ruru eru maka ụdị ọrụ a.
Ọ kọwara, "nnukwu nsogbu taa bụ akụrụngwa mmadụ."
Ihe ịma aka ọhụrụ maka onye a mụrụ.
Lupita Nyong'o hoputara ndi nwanyi kachasi nma na uwa nile site na akwukwo ndi mmadu
Queen Zingha nke Angola, na-eguzogide ochichi ndị Portuguese